ဆရာမလေးတွေ အဆောင်/အိမ်ငှား ပူစရာမလိုအောင် ရွာဒေသခံတွေက ရည်းစားစကားလိုက်ပြော..ညားရင် ပူစရာမလို”ဆိုတဲ့ ပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် (အသံဖိုင်) – MEDIALANN
လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘုတ်စ် စာမျက်နှာထက်မှာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းရဲ့ ပြောဆိုမှု စကားတချို့ အများပြည်သူထံမှ ဝေဖန် ကန့်ကွက်သံတွေ ထွက်ပေါ်လို့ လာနေပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းဟာ ၂၀၁၉ အောက်တိုဘာ ၅ရက်နေ့ ဒမငယ်သစ်ချိုခြံ လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာထဲမှ စကားအချို့ကို ကန့်ကွက်နေကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ရပ်ဝေးက ဆရာမတွေအတွက် ဘော်ဒါဆောင်တွေ ဘာတွေက တကယ်တော့ ပူစရာမလိုပါဘူး။တာဝန်ကျတဲ့ နေရာက ဒေသခံလူငယ်လေးတွေကို ရည်းစားစကား လိုက်ပြောခိုင်းလိုက်ပေါ့….. ဒါမှ တကယ်လို့ ညားသွားခဲ့ရင် အိမ်ငှားနေစရာ မလိုတော့သလို ဘော်ဒါဆောင်လည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့”
ဦးဝင်းသိန်း(ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်) ဒမငယ်သစ်ချိုခြံ လူထုတွေ့ဆုံပွဲ အမှာစကား. .၂၀၁၉ အောက်တိုဘာ ၅ရက် . . ဆိုတဲ့ ပို့စ်တက်လာပြီး နောက်ပိုင်း အသံဖိုင်လည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဦးဝင်းသိန်းသို့ ပေးစာတစ်စောင်ဟူသော လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ရေးသားဖေါ်ပြလာသော ပို့စ်တစ်ခုဟာ အများပြည်သူမှ မျှဝေထောက်ခံမှုတွေ အများအပြား ရရှိနေသဖြင့် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆရာမအတွက် ကျွန်တော်၏ ပေးစာတစ်စောင်
ဒီလိုတင်ထားတာ တွေ့လို့ပါ (ပညာရေးအတွက် ရတက်မအေးရှာလေသူ)
စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ရပ်ဝေးက ဆရာမတွေအတွက် ဘော်ဒါဆောင်တွေ ဘာတွေက တကယ်တော့ ပူစရာမလိုပါဘူး။ တာဝန်ကျတဲ့ နေရာက ဒေသခံလူငယ်လေးတွေကို ရည်းစားစကား လိုက်ပြောခိုင်းလိုက်ပေါ့…..
ဒါမှ တကယ်လို့ ညားသွားခဲ့ရင် အိမ်ငှားနေစရာ မလိုတော့သလို ဘော်ဒါဆောင်လည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့”ဦးဝင်းသိန်း(ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်) ဒမငယ်သစ်ချိုခြံ လူထုတွေ့ဆုံပွဲ အမှာစကား၂၀၁၉ အောက်တိုဘာ ၅ရက်)ဦးဝင်းသိန်းရေ ကျောင်းဆရာမတွေ လင်ရှာ ထွက်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။ သင်စရာ အတွက် ကလေးတွေဆီသွားတာပါဗျာ ။ဦးဝင်းသိန်းရေ ကျောင်းဆရာမတွေရဲ့ အရှက်တရား က အပျက်သမားလို အညှာ သိပ်လွယ်တယ် ထင်သလား။
သိက္ခာအတွက်ဆို အသက်ကိုတောင်ရင်းမယ် အိနြေ္ဒရှင်တွေဆိုတာ ခင်ဗျား သိရင်ကောင်းမယ်။ဦးဝင်းသိန်းရေ မြန်မာဓလေ့ အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိအောင် ခင်ဗျားကို ပြောပြရဦးမယ်ဗျ။ရပ်ရွာဒေသတွေဆိုတာ ဆရာသမားကို သိပ်ရိုသေကြသဗျ။” ဟေ့ငါတို့ရွာက ကလေးတွေကို စာတတ်အောင် လာပြီး သင်ပေးတဲ့ ဆရာမလေးတွေကို ဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ကြပါကွ။ စောင့်ရှောက်တဲ့အခါလည်း အမေလို အမလို နှမလေးလို စောင့်ရှောက်ကြကွဲ့။စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားကြနဲ့။ ငါတို့ရွာကို မိဝေးဖဝေး တစ်နယ်တစ်ကျေးက လာပြီး စာသင်ပေးတဲ့ ဆရာမလေး ငါတို့မှ မစောင့်ရှောက်ရင် ဘယ်သူစောင့်ရှောက်မလဲ။
တကယ်လို့ အခြားရွာသူရွာသားများက ဆရာမလေးတွေကို ထိကပါးရိကပါး လုပ်ရင် တို့ကတောင် ကာကွယ်ပေးရမယ် မဟုတ်လား။ အဲ့ဒီတော့ ငါတို့ရွာသားတွေ ဆရာမလေးတွေကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်အောင် မလုပ်မိကြစေနဲ့။အဓိက ငါမှာချင်တာတော့ အပျိုလူပျို ပိုးကြပန်းကြမယ် ဆိုရင်တောင် သင့်တော်၏ မသင့်တော်၏ အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားကြကွဲ့။ ဆရာမလေးတွေ အနေမခက်ကြစေနဲ့ ဟုတ်လား။
ရွာကို ဆရာမတစ်ယောက် ကျဖို့ ဘယ်လိုလျှောက်သလဲဆိုတာ မင်းတို့အသိဘဲ မဟုတ်လား။ ကိုယ့်ကြောင့် ကိုယ့်ရွာက ကလေးတွေ ဒုက္ခမရောက်စေနဲ့။ဒါဟာ ရှေးရှေးတုန်းက ရွာလူကြီးများရဲ့ စကားပါ ဦးဝင်းသိန်း။ အခုထက်ထိ ကျွန်တော်တို့ နယ်တွေမှာ လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်ထားတုန်းပါဘဲ။ဆရာမအသစ်လေးတွေ ရောက်လာရင် ရွာလူကြီးက အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ကို ပြောတာပ။
ခင်ဗျားဟာ အခုတော့ဗျာ။ ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ ဂါရဝတရားတွေကိုမှ မထောက်။ရပ်ဝေးတစ်နယ်တစ်ကျေးက ခိုကိုးမဲ့နေတဲ့ ဆရာမလေးတွေကို ရွာ လူပျိုတစ်သိုက်နဲ့ နွားမြိုင်လိုက်သလို လိုက်ခိုင်းတာတော့ ခင်ဗျား အကြီးအကဲတစ်ယောက် ဟုတ်ပါလေစ။ခင်များစကားဟာ နယ်အစွန် နယ်အဖျားတွေမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ဆရာမလေးတွေ အတွက် အလွန်ရင်လေးစရာပါ။
” ဟေ့ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်က အားပေးအားမြှောက်ပြုနေပြီကွ မရမက ယူကြစို့” မခက်ချေဘူးလား။ အခုခေတ်ကလည်း မုဒိမ်းမှုတွေက ပေါပါဘိသနဲ့။ခင်ဗျားစကားဟာ. . ဆရာမလေးတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို စော်ကားလိုက်တာ. .ဆရာမလေးတွေရဲ့ ကာယအိနြေ္ဒလုပ်ခြုံမှုကို ရိုက်ချိုးလိုက်တာ..ဆရာမလေးတွေရဲ့ စာသင်ခြင်းတာဝန်ထက် လင်ယူသားမွေးရေး လုပ်ကြလို့ပြောလိုက်တာ။
ပြီးတော့ ဒေသခံတွေရဲ့ ရိုးသားမှုကို အဆိပ်ခတ်လိုက်တာ ဒေသခံတွေရဲ့ ဆရာ/ဆရာမတွေ အပေါ်ထားတဲ့ ဂါရဝတရားတွေကို ရိုက်ချိုးလိုက်တာ. .ဒေသခံတွေရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာတွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်တာဒေသခံတွေ ဇက်ရဲလက်ရဲ ဖြစ်အောင် မြောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ပေးလိုက်တာ (တစ်နည်း) သွယ်ဝိုက်ခြင်းဖြင့် မုဒိမ်းမှုတွေ ကျူးလွန်အောင် လှုံ့ဆော်နေတာဒေသခံတွေ ရဲ့ ဒေသတွေဆီ ဆရာမလေးတွေ တာဝန်သွားထမ်းဆောင်ဖို့ မဝံ့ရဲအောင် တမင်လုပ်လိုက်တာများလားလို့ တွေးမိပါတော့သည်။
လူမှုကှနျယကျဖဘေု့တျဈ စာမကျြနှာထကျမှာ ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီးဝနျကွီးခြုပျ ဦးဝငျးသိနျးရဲ့ ပွောဆိုမှု စကားတခြို့ အမြားပွညျသူထံမှ ဝဖေနျ ကနျ့ကှကျသံတှေ ထှကျပျေါလို့ လာနပေါတယျ။ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီးဝနျကွီးခြုပျ ဦးဝငျးသိနျးဟာ ၂၀၁၉ အောကျတိုဘာ ၅ရကျနေ့ ဒမငယျသဈခြိုခွံ လူထုတှဆေုံ့ပှဲမှာ ပွောဆိုခဲ့တဲ့ အကွောငျးအရာထဲမှ စကားအခြို့ကို ကနျ့ကှကျနကွေတာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
“စာသငျကြောငျးတှမှော ရပျဝေးက ဆရာမတှအေတှကျ ဘျောဒါဆောငျတှေ ဘာတှကေ တကယျတော့ ပူစရာမလိုပါဘူး။
တာဝနျကတြဲ့ နရောက ဒသေခံလူငယျလေးတှကေို ရညျးစားစကား လိုကျပွောခိုငျးလိုကျပေါ့….. ဒါမှ တကယျလို့ ညားသှားခဲ့ရငျ အိမျငှားနစေရာ မလိုတော့သလို ဘျောဒါဆောငျလညျး မလိုတော့ဘူးပေါ့”
ဦးဝငျးသိနျး(ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီးဝနျကွီးခြုပျ) ဒမငယျသဈခြိုခွံ လူထုတှဆေုံ့ပှဲ အမှာစကား. .၂၀၁၉ အောကျတိုဘာ ၅ရကျ . . ဆိုတဲ့ ပို့ဈတကျလာပွီး နောကျပိုငျး အသံဖိုငျလညျး ထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဦးဝငျးသိနျးသို့ ပေးစာတဈစောငျဟူသော လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ ရေးသားဖျေါပွလာသော ပို့ဈတဈခုဟာ အမြားပွညျသူမှ မြှဝထေောကျခံမှုတှေ အမြားအပွား ရရှိနသေဖွငျ့ ဖျေါပွပေးလိုကျပါတယျ။
ဆရာမအတှကျ ကြှနျတျော၏ ပေးစာတဈစောငျ
ဒီလိုတငျထားတာ တှလေို့ပါ (ပညာရေးအတှကျ ရတကျမအေးရှာလသေူ)
စာသငျကြောငျးတှမှော ရပျဝေးက ဆရာမတှအေတှကျ ဘျောဒါဆောငျတှေ ဘာတှကေ တကယျတော့ ပူစရာမလိုပါဘူး။ တာဝနျကတြဲ့ နရောက ဒသေခံလူငယျလေးတှကေို ရညျးစားစကား လိုကျပွောခိုငျးလိုကျပေါ့…..ဒါမှ တကယျလို့ ညားသှားခဲ့ရငျ အိမျငှားနစေရာ မလိုတော့သလို ဘျောဒါဆောငျလညျး မလိုတော့ဘူးပေါ့”ဦးဝငျးသိနျး(ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီးဝနျကွီးခြုပျ) ဒမငယျသဈခြိုခွံ လူထုတှဆေုံ့ပှဲ အမှာစကား၂၀၁၉ အောကျတိုဘာ ၅ရကျ)
ဦးဝငျးသိနျးရေ ကြောငျးဆရာမတှေ လငျရှာ ထှကျတာမဟုတျဘူးဗြ။ သငျစရာ အတှကျ ကလေးတှဆေီသှားတာပါဗြာ ။ဦးဝငျးသိနျးရေ ကြောငျးဆရာမတှရေဲ့ အရှကျတရား က အပကျြသမားလို အညှာ သိပျလှယျတယျ ထငျသလား။ သိက်ခာအတှကျဆို အသကျကိုတောငျရငျးမယျ အိန်ဒွရှေငျတှဆေိုတာ ခငျဗြား သိရငျကောငျးမယျ။ဦးဝငျးသိနျးရေ မွနျမာဓလေ့ အကွောငျး ကောငျးကောငျး သိအောငျ ခငျဗြားကို ပွောပွရဦးမယျဗြ။ရပျရှာဒသေတှဆေိုတာ ဆရာသမားကို သိပျရိုသကွေသဗြ။
” ဟငေ့ါတို့ရှာက ကလေးတှကေို စာတတျအောငျ လာပွီး သငျပေးတဲ့ ဆရာမလေးတှကေို ဝိုငျးဝနျးစောငျ့ရှောကျကွပါကှ။ စောငျ့ရှောကျတဲ့အခါလညျး အမလေို အမလို နှမလေးလို စောငျ့ရှောကျကွကှဲ့။စိတျနဲ့တောငျ မပွဈမှားကွနဲ့။ ငါတို့ရှာကို မိဝေးဖဝေး တဈနယျတဈကြေးက လာပွီး စာသငျပေးတဲ့ ဆရာမလေး ငါတို့မှ မစောငျ့ရှောကျရငျ ဘယျသူစောငျ့ရှောကျမလဲ။
တကယျလို့ အခွားရှာသူရှာသားမြားက ဆရာမလေးတှကေို ထိကပါးရိကပါး လုပျရငျ တို့ကတောငျ ကာကှယျပေးရမယျ မဟုတျလား။ အဲ့ဒီတော့ ငါတို့ရှာသားတှေ ဆရာမလေးတှကေို စိတျအနှောကျအယှကျ ဖွဈအောငျ မလုပျမိကွစနေဲ့။အဓိက ငါမှာခငျြတာတော့ အပြိုလူပြို ပိုးကွပနျးကွမယျ ဆိုရငျတောငျ သငျ့တျော၏ မသငျ့တျော၏ အကွိမျကွိမျစဉျးစားကွကှဲ့။ ဆရာမလေးတှေ အနမေခကျကွစနေဲ့ ဟုတျလား။
ရှာကို ဆရာမတဈယောကျ ကဖြို့ ဘယျလိုလြှောကျသလဲဆိုတာ မငျးတို့အသိဘဲ မဟုတျလား။ ကိုယျ့ကွောငျ့ ကိုယျ့ရှာက ကလေးတှေ ဒုက်ခမရောကျစနေဲ့။ဒါဟာ ရှေးရှေးတုနျးက ရှာလူကွီးမြားရဲ့ စကားပါ ဦးဝငျးသိနျး။ အခုထကျထိ ကြှနျတျောတို့ နယျတှမှော လကျဆငျ့ကမျး သယျဆောငျထားတုနျးပါဘဲ။ဆရာမအသဈလေးတှေ ရောကျလာရငျ ရှာလူကွီးက အစညျးအဝေးချေါပွီးတော့ကို ပွောတာပ။
ခငျဗြားဟာ အခုတော့ဗြာ။ ကြေးရှာတှမှောရှိတဲ့ ယဉျကြေးမှု ဓလထေုံ့းစံ ဂါရဝတရားတှကေိုမှ မထောကျ။ရပျဝေးတဈနယျတဈကြေးက ခိုကိုးမဲ့နတေဲ့ ဆရာမလေးတှကေို ရှာ လူပြိုတဈသိုကျနဲ့ နှားမွိုငျလိုကျသလို လိုကျခိုငျးတာတော့ ခငျဗြား အကွီးအကဲတဈယောကျ ဟုတျပါလစေ။ခငျမြားစကားဟာ နယျအစှနျ နယျအဖြားတှမှော တာဝနျကနြတေဲ့ ဆရာမလေးတှေ အတှကျ အလှနျရငျလေးစရာပါ။
” ဟေ့ ဝနျကွီးခြုပျကိုယျတိုငျက အားပေးအားမွှောကျပွုနပွေီကှ မရမက ယူကွစို့” မခကျခဘြေူးလား။ အခုခတျေကလညျး မုဒိမျးမှုတှကေ ပေါပါဘိသနဲ့။ခငျဗြားစကားဟာ. . ဆရာမလေးတှရေဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကို စျောကားလိုကျတာ. .ဆရာမလေးတှရေဲ့ ကာယအိန်ဒွလေုပျခွုံမှုကို ရိုကျခြိုးလိုကျတာ..ဆရာမလေးတှရေဲ့ စာသငျခွငျးတာဝနျထကျ လငျယူသားမှေးရေး လုပျကွလို့ပွောလိုကျတာ။
ပွီးတော့ ဒသေခံတှရေဲ့ ရိုးသားမှုကို အဆိပျခတျလိုကျတာ ဒသေခံတှရေဲ့ ဆရာ/ဆရာမတှေ အပျေါထားတဲ့ ဂါရဝတရားတှကေို ရိုကျခြိုးလိုကျတာ. .ဒသေခံတှရေဲ့ ဓလထေုံ့းတမျး အစဉျအလာတှကေို ဖကျြဆီးလိုကျတာဒသေခံတှေ ဇကျရဲလကျရဲ ဖွဈအောငျ မွောကျထိုးပငျ့ကျောလုပျပေးလိုကျတာ (တဈနညျး) သှယျဝိုကျခွငျးဖွငျ့ မုဒိမျးမှုတှေ ကြူးလှနျအောငျ လှုံ့ဆျောနတောဒသေခံတှေ ရဲ့ ဒသေတှဆေီ ဆရာမလေးတှေ တာဝနျသှားထမျးဆောငျဖို့ မဝံ့ရဲအောငျ တမငျလုပျလိုကျတာမြားလားလို့ တှေးမိပါတော့သညျ။